Rooble oo la kulmaya Musharixiinta Mucaaradka | KEYDMEDIA ONLINE
Waa kulankii labaad oo Rooble la yeelanayo Musharixiinta mudo Todobaad gudahiisa, waxaana la filayaa in dhinacyada ay soo afjaraan khilaafkka taagan.
MUQDISHO, Soomalaiya - Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble [Rogane], ayaa lagu wadaa in Maanta markale la kulmo Musharixiinta Mucaaradka, si loo dhameytiro wadahadalladii u socday tan iyo tobaadkii tagey.
Kulanka Maanta waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimo muhiim ah, oo ugu horeeyo kaalinta Musharixiinta ee wadahadallada arrimaha dhameystirka iyoo dhaqan-gelinta heshiiskii doorashadda Sep 17.
Heshiis lix qodob ka koobnaa ayay wada saxiixdeen Musharixiinta iyo Rooble Khamiistii hore, kaasoo baajiyay banaanbaxii Jimcaha, waxaana Xukuumadda ogolaatay inay raali-gelin ka bixiso weerarkii Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif.
Qodobada heshiiska waxaa ugu adag midka ku saabsan dalabka Musharixiinta in laga qeybgeliyo wadahadallada u dhaxeeya Farmaajo iyo Maamul Goboleedyada, ee go'aannada looga gaarayo arrimaha doorashadda.
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ma ogola in miiska wadahadalka ay yimaadaan mucaaradka, iyagoo u arka in hadii fursadaas la siiyo ay gacmahooda ka baxayaan qorshayaasha ay u dejiyeen doorashadda, oo ay kamid tahay in gudiga doorashadda kala kala diro.
Isagoo ku jira jeebka Farmaajo, Rooble ayaa isku dayaya qaab wadahadal ah inuu ku dhameeyo khilaafka dowladda kala dhaxeeya Musharixiinta, inkastoo uusan lahayn awood badan oo go'aanno ku gaari karo.